Hello Nepal News » भ्यालेन्सियालाई हराएपछि पिकेको कडा बोली : खेलपछि के–के भने ?
भ्यालेन्सियालाई हराएपछि पिकेको कडा बोली : खेलपछि के–के भने ?
एजेन्सी, वैशाख २०
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि दौडमा रहेको बार्सिलोनाले लिगको ३४औं साताको खेलमा महत्त्वपूर्ण जित निकाल्यो । अवे मैदानमा लिगको १४औं स्थानको भ्यालेन्सियालाई बार्सिलोनाले २–३ ले हरायो । बार्सिलोनाले खेलमा पछि परेको स्थिति उल्टाएर जित हात पारेको थियो । बार्सिलोनाको अति नै महत्त्वपूर्ण जितमा कप्तान लिओनल मेस्सीले २ गोल र एन्टोनी ग्रीजम्यानले १ गोल गरे ।
सो जितपछि बार्सिलोनाले उपाधि होडमा आफूलाई कायमै राखेको छ । अब उसले ३७ खेलपछि कूल ७४ अंक बनाएको छ । यो दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडको अंकसँग बराबरी हो । तर, यो सिजन दुवै इएल क्लासिको जितेका आधारमा रियल बार्सिलोनाभन्दा अगाडि रहेको छ । यता, बार्सिलोनाले भ्यालेन्सियालाई हराएर लिग लिडर एथ्लेटिको मड्रिडसँग दूरी पनि ५ बाट २ मा छोट्याएको छ ।
ताजा अवस्थामा एथ्लेटिको ७६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदा रियल ७४ अंकसहित दोस्रो तथा समान ७४ नै अंक भएको बार्सिलोना तेस्रो स्थानमा छ । एक खेल कम खेलेको सेभिल्ला ७० अंकसहित चौथो स्थानमा छ । उसले आज आफ्नो खेल एथ्लेटिक बिल्बाओसँग घरेलु मैदानमा खेल्दै छ । सो खेल जिते सेभिल्लाले अंक तालिकामा सुधार गर्दै शीर्ष तीन वटै टोलीमाथि दबाब कायमै राख्नेछ ।
ताजा अवस्थामा उपाधि होडमा शीर्ष चार वटै टोली रहेका छन् । तर, मुख्य रूपमा बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडबीच आगामी (शनिबार) हुने खेलको नतिजाले उपाधिको प्रमुख दाबेदार को बन्छ र शीर्ष स्थानमा को रहन्छ भन्ने कुरा देखिनेछ । तसर्थ, लिगमा अब अन्तिम ४ खेल मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा उपाधि होडलाई धेरै हदसम्म यही खेलले टुंगो लगाउनेछ । एथ्लेटिको र बार्सिलोना दुवै शनिबारको खेलमा एअर्कालाई हराएर उपाधितर्फ अघि बढ्ने दाउमा छन् ।
सो खेलमा जसले स्पष्ट जित निकाल्छ, त्यही टिमले शीर्ष स्थानमा अग्रता बनाउनेछ । यदि अन्य बाँकी खेलमा अंक नगुमाए यो खेल जित्ने टिम नै उपाधि च्याम्पिय बन्नेछ । र, यो अवसर बार्सिलोना र एथ्लेटिको दुवैका लागि रहेको छ । तर, यदि यो खेल बराबरीमा रोकियो भने यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा रियल मड्रिडलाई पुग्नेछ । र, उसले आफ्ना सबै खेल जितेर सजिलै उपाधि जित्न सक्ने सम्भावना पनि खुला छ । तसर्थ, यो सिजनको उपाधिका लागि बार्सिलोना र एथ्लेटिकोबीचको खेल निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
पिकेको आश– रियल मड्रिड हार्छ अनि हामी उपाधि जित्छौं !
गत राति महत्त्वपूर्ण खेलमा भ्यालेन्सियालाई हराएपछि बार्सिलोनाका उपकप्तान तथा डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले आफूहरूले उपाधि जित्ने बलियो दाबी गरेका छन् । उनले आफूहरूले बाँकी ४ वटै खेल जित्ने दाबी मात्रै गरेनन्, रियल मड्रिडले कहीं न कहीं अंक गुमाउने जिकिर पनि गरे । यदि बार्सिलोना एथ्लेटिको मड्रिडसँग बराबरीमा रोकिए पनि बार्सिलोनाले उपाधि जित्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
यदि बार्सिलोनाले एथलेटिकोलाई हरायो र अन्य ३ वटै खेल जितेको खण्डमा पनि रियल मड्रिडले आफ्ना सबै खेल जिते बार्सिलोना उपाधि च्याम्पियन बन्दैन । बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोलाई हराउँदै अन्य ३ खेल जित्नुपर्छ र रियलले कम्तीमा १ अंक गुमाउनुपर्छ । तर, बार्सिलोनाका पिकेले भने यस्तै हुने दाबी गरेका छन् ।
‘हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण खेल जित्यौं । अन्तिम समयमा हामी केही समस्यामा थियौं । तर, हामीले अग्रता बचाएर अति नै महत्त्वपूर्ण ३ अंक लियौं । यसको अर्थ बार्सिलोना उपाधिका लागि अन्तिमसम्म नै रहनेछ,’ पिकेले भने, ‘मलाई विश्वास छ, यदि हामीले बाँकी ४ खेल जित्यौं भने हामी च्याम्पियन बन्नेछौं । हामी अझै पनि यस कुरामा विश्वास गर्छौं ।’
पिकेका अनुसार बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोलाई जित्नेछ र रियलले कुनै न कुनै खेलमा अंक गुमाउनेछ । ‘हामी उपाधि जित्न चाहन्छौं भने एथ्लेटिकोलाई हराउनैपर्छ । मलाई विश्वास छ, रियल मड्रिडले कहीं न अंक गुमाउनेछ । उनीहरूले सेभिल्लासँग कठिन खेल बाँकी नै छ । बाँकी ४ खेलमध्ये उनीहरूले १ अंक गुमाए भने हामीमाथि दबाब कम हुन्छ । तर, त्योभन्दा पहिला हामीले एथ्लेटिको मड्रिडलाई जित्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति २० बैशाख २०७८, सोमबार ०६:५७